Waxaan ku baraynaa sida looga baxo rukunka Apple Music | Wararka IPhone
Apple Music waxay u timid macruufka bishii Juun 30, 2015, iyagoo ballanqaaday inay noo keeni doonaan dhammaan muusikada ugu fiican qiimaha ugu fiican. Sidaad ogtahay, gacanta Apple Music waxay noo soo bandhigeen qorshahooda tijaabada ah ee saddexda bilood ah, sidaa darteed muddo seddex bilood ah waxaan ku raaxeysan karnaa dhammaan faa'iidooyinka ku jira rukunka Apple Music, si kastaba ha noqotee, inaan ugu raaxeysano rukunkaas waa inaan xaqiijineynaa bangigeenna xogta xisaabaadka sidaas darteed, aqbal in marka tijaabadan bilaashka ah ay dhammaato, inta u dhiganta lagu soo dallaci doono koontadayada bangiga. Laakiin waxay noqon kartaa in Apple Music uusan ku qancin, ama aadan si fudud u rabin inaad bixiso adeegga, waxaad si fudud u kansali kartaa rukunka Apple Music Iyada oo loo marayo qalabkaaga macruufka ama Mac-kaaga ee iTunes, Actualiad iPhone ayaan ku tusaynaa sida.
1 Qorshayaasha lacag bixinta Apple Music
2 Ka noqo rukummada macruufka
3 Jooji iTunes ka Mac OS
Qorshayaasha lacag bixinta Apple Music
Haddii ay dhacdo inaad wali isweydiineyso inaad iibsato iyo inkale, waxaan ku xasuusineynaa labada qorshe ee lacag bixinta Apple Music, iyadoo kuxiran hadday tahay xisaab shaqsi ama mid qoys.
Koontada shaqsi: Dhamaan muusikada hal qalab, € 9,99 bishiiba.
Xisaabta qoyska: Dhamaan muusikada ilaa 6 aalado kala duwan oo isku koox ah "Qoys ahaan", .14,99 XNUMX bishiiba.
Ka noqo rukummada macruufka
Ka joojinta rukunka Apple Music isla codsiga Muusiga ee ku jira macruufka ama qeybta iTunes Store ee Settings waa mid aad u fudud, In News News waxaan ku sharaxeynaa sida:
Waxaan fureynaa barnaamijka muusikada oo waxaan gujineynaa astaanta isticmaale ee geeska bidix ee kore si aan u galno astaantayada iyo qaabeynteeda.
Guji dheriga «eeg Aqoonsiga Apple », menu cusub ayaa furi doona iyo qeybta Macaamiisha waxaan mar labaad gujineynaa xulashada buluuga ah ee la yiraahdo Maamul
Waxay na tusi doontaa nooca diiwaangelinta aan hayno, oo ay weheliso taariikhda dhammaadka iyo bilawga lacag bixinta. Wax yar ka hooseeya waa habka cusboonaysiinta otomaatiga ah ee aan qandaraaska qaadanay.
Waxaan joojineynaa furaha u muuqda oo adeegga waa la joojinayaa, way fududahay.
Jooji iTunes ka Mac OS
Waxaan gujineynaa galitaanka oo aan galnaa xogtayada.
Shaqadii ugu dambeysay ee loogu yeero Macluumaadka koontada, markale ayaan gujinay.
Waxaan u dhaqaaqeynaa qeybta goobaha iyo qaybta Diiwaangelinta, waxaan ku cadaadineynaa maareynta.
Hadda waxaan si fudud u gujineynaa Maya halkee baa laga leeyahay "cusboonaysiinta otomatiga ah«.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Tijaabaddii saddexda bilood ahayd ee Apple Music way dhammaatay, sida loo joojiyo rukunkaaga
Waxaan raadinayaa 5 qof oo halis ah oo heysta muusikada tufaaxa qoyska waxayna noqon laheyd 2,50 XNUMX bishiiba. Waan helay tan
Hello Daniel, waan xiiseynayaa.
Ma aqaano inay khalad tahay ama wax uun tahay ... laakiin waxaan helay sheyga lacag la’aanta ah ee bilaashka ah ... (Anigu ma aanan kicin) suurta gal ma tahay inaan haysto adeegga bilaashka ah anigoon dhaqaajin ...?
Emulator A MAME wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa TV-ga Apple
Sida loo daawado Sawirrada Tooska ah ee iPhone duug ah